SOSIALY AO BOENY : Mbola voahilika noho ny tsy fahampian’ ny fotodrafitrasa ny sembana
Io no nampikaikaika ireo sembana tonga maro niara-nankalaza ny datin’ ny 03 desambra, izay andro maneran-tany natokana ho azy ireo. 5 décembre 2018
Tokim-panantenana kosa no setrin’izay hataka nataon’ireto olona tra-pahasebanana ireto avy amin’ireo manampahefana tonga nanotrona io lanonana io tamin’ ny alalan’ireo kabary nifandimbiasana araka ny arofenitra misy azy avy. Koa nilazan’ireo manampahefana ireo fa hojerena ny lafiny fanantanterahana izany fananganana fotodrafitrasa mifanaraka aminy filan’ireto sembana ireto, izay isany zo fototra nosoniavin’i Madagasikara tao amin’ny satan’ny firenena mikambana izany.
"Ny fizakantenan’ ireo olona manana fahasembanana, amin’ny fampivoarana mampiaty, ara-drariny ary maharitra". Io no lohahevitra napetraky ny minisitera ny mponina sy fiahiana ara-tsosialy ary fampivoarana ny vehivavy ny fotoam-pankalazana teto. Tsy diso anjara tamin’izany ireo olona tra-pahasemabanana teto Mahajanga ambonivohitra. Niantso ny rehetra teto ramatoa Jogea, talem-paritry ny mponina ato aminy faritra Boeny, mba tsy hanilikilika ireo tra-pahasembanana ireo fa manan-jo toy ny olona rehetra izy ireo. Ary izay no anisan’ny fanentanana mipololotra ao amin’ireo onja-peo eto Mahajanga, ho fampahafantarana ireo karazan-jo rehetra tokony hositrahan’ny sembana.
Tsy misy miraharaha
Nanambara kosa tetsy an-danin’izay Rafidimanantsoa James Thomas, filohan’ny Croph, na ny Collectif régional des organisatios des personnes handicapeés de Mahajanga, fa na eo aza ireo fanentanana tsy an-kiato ireo, dia betsaka ireo olona minina manitsaka ny zon’ireo olona tra-pahasembanana ka nampitaraina ireto farany izany. Miantso ny fahatsapahan-tena ny rehetra araka izany ity filohan’ny sembana eto Boeny ity mba tsy hanao tsinontsinona ny zon’izy ireo, sa ve tsy misy fanenjehan’ny lalàna ireo olona mpanilika ny sembana ireo ka mahatonga ny maro tsy miraharaha azy ireo ? hoy hatrany ity filohan’ny Croph ity.
Miisa 450 ireo olona tra-pahasembanana voarakitra ao anatin’ny bokin’ny fikambanana Croph ato anaty ny faritra Boeny amin’izao fotoana izao, ankoatra ireo izay tsy mbola niditra ao anaty fikambanana. Tao amin’ny tokotany malalaky ny birao iraisam-paritry ny mponina etsy Mangarivotra Mahajanga no nanatanterahana ny lanonana ny fankalazana ny 03 desambra io, izay notronin’ireo mpiara- miombon’antoka amin’ny sembana ny tapany misandratr’andro. Nitohy taminy fiaraha-misakafo ny antoandro tao an-toerana ihany ny lanonana, ary nofaranana taminy hetsika ara-kolotoraly sy zava-kanto ny tapany tolakandro ny fankalazana ity andro maneran-tany ho an’ireo olona tra-pahasembanana ireo.